ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်ခြင်းနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများ (၂၀၁၈) - Your Brain On Porn
Curr Opin ကလေး။ 2018 Aug;30(4):466-471. doi: 10.1097/MOP.0000000000000637.
Miller က E ကို1, ဂျုံးစ် ka1, McCauley HL2.
ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသားကောင်လေးနက်တဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးအကျိုးဆက်များနှင့်အတူငယ်ရွယ်လူကြီးသို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးပျံ့နှံ့အတွက်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်တိုးအတွက်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်အရာကို သာ. ကွီးမွတျအာရုံစူးစိုက်မှုကလက်ရှိမူဝါဒများနှင့်အလေ့အကျင့်အကြောင်းကြားရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဆိုက်ဘာချိန်းတွေ့အလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်ဆယ်ကျော်သက်ချိန်းတွေ့အကြမ်းဖက်မှု (ADV) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသားကောင်, မြီးကောင်ပေါက်အကြားအလွန်အမင်းပျံ့နှံ့နေသည်။ လေ့လာရေးဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေး, အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများထက်ပိုသားကောင်သတင်းပို့အတူလိင်အမျိုးအစားကွဲပြားမှုတွေ့ပြီ။ လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုလူနည်းစုလူငယ်လည်းသူတို့ရဲ့လိင်ကွဲများထက်အကြမ်းဖက်မှုသားကောင်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားပျံ့နှံ့ခံစားရသည်။ အန္တရာယ်အချက်များပေါ်တွင်လေ့လာရေးကလေးဘဝအခကျအခဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုစာမေးပွဲပါဝင်သည် အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်အပေါ်ကျား inequitable သဘောထားတွေ၏အဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ မကြာမီကကာကွယ်တားဆီးရေးသုတေသနကြည့်ရှုနေသူကြားဝင်များ၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်နှင့်ကျား, မစံနှုန်းများပြောင်းလဲပါဝင်သည်။
မကြာမီက ADV / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုသုတေသနပြုပျေါလှငျပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်. အန္တရာယ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်မှုများကိုလျော့ချကူညီစေခြင်းငှါအကာအကွယ်အချက်များနှစ်ဦးစလုံး။ လူငယ်စောင့်ရှောက် Practitioner (ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်အတူရုန်းကန်ရှိသူများနှင့်ဆင်းရဲသောကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုသောအခြားအပြုအမူတွေအပါအဝင်) လူနာမြင်နေရသောအခါ ADV / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းစွာ ADV / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုခံစားနေရပြီးရှိသူများသိရှိနိုင်ဖို့စိစစ်ရေးကိရိယာများအပေါ်မှီခိုမနေသင့်။